Maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan qaramada midoobay oo ka wada hadlay dhowrista xaquuqul insaanka - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka socday qeybta xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay.
Kulankan ayaa looga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa arimaha dhowrista xaquuqul insaanka, iyo sidii dadka barakacayaasha ay u heli lahaayen nolal ku haboon islamarkana doorashooyinka soo socda ay kaalin uga qaadan lahayeen dadka barakacayasha.
Xubnaha ka socday qaramada midoobay ayaa maamulka gobolka Banaadir, ku amaaney kaalinta ay ka qaadanaya barnaamijiyada kor loogu qaadayo dhowrista xaquuqul insaanka, iyo qorshayaasha maamulka u diyaariyay kumanaanka qoys oo ku soo barakacay caasimadda.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ( Eng: Yariisow) ayaa sheegay in xubnaha ka socda Qaramada Midoobay ay u sheegeen in maamulka ay ka go’an tahay ilaalinta xaquuqul insaanka.
“Arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay , sidii dadka barakacayaasha, looga talo gelin lahaa doorashooyinka soo socda, iyo ilaalinta xaquuqul insaanka ayaan ka wada hadalnay, waxaan u ballan qaaday in ka maamul ahaan aan xil iska saarnay dhowrista xaquuqul insaanka’’ ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Ra'iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay xarunta maamulka gobolka Banaadir